အာဆင်နယ်အသင်းကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် မီဆွတ်အိုဇေးလ်ဟာ သူ့ခြေထဲမှာ ဘောလုံးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာ့အညံ့ဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပေါလ်မာဆင်က စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အိုဇေးလ်ဟာ ဘောလုံးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့ အာတီတာရဲ့ လူစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို၊ ကစားခဲ့တဲ့ (၄) ပွဲစလုံးမှာလည်း တစ်မိနစ်မှ ကစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ နောက်ကျောဒဏ်ရာကြောင့် လွဲချော်ခဲ့ရသည့်အတွက် လာမည်နောဝစ်ချ်စီးတီးနှင့်ပွဲကိုလည်း ဆက်လက်လွဲချော်ဖို့ရှိတယ်လို့ အာတီတာက အရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အိုဇေးလ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အသင်းအတွက် များစွာအကျိုးပြုခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အသင်းရဲ့ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါပြီ။ “အိုဇေးလ်က သာမန်အသင်းတစ်သင်းမှာတော့ ကောင်းစွာ ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ အသင်းမှာ ကစားရင်တော့ ပွဲကို လွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီ အာဆင်နယ်အသင်းမှာတော့ ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ အသက် ၃၀ ရောက်မှ ကစားဟန်ကို မပြောင်းလဲနိုင်လို့ပါ။ အာဆင်နယ်ကလည်း သူ့အတွက်နဲ့ ကစားပုံကို ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး ”
“ပြောင်းလဲမှုနောက်ကို သူမလိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကစားသမားတွေကို လှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ခင်ဗျားရဲ့အသင်းက အနည်းဆုံးဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ၇၀ % ပိုင်ဆိုင်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါဆို သေချာပေါက် သူကစားခွင့်ရမှာပါ။ သူ့ကို ဝန်းရံပြီးတော့ ခင်ဗျားကစားပေတော့။ အိုဇေးလ်ဘယ်လိုကစားတယ်ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့အားလုံးသိတယ်နော်။ သူ့ကို ဘောလုံးပေးလိုက်ရင် ၊ သူက ခင်ဗျားကို ပြန်ပေးဖို့ ရှာနေမှာ။ ခင်ဗျားမှာသာ ဘောလုံးမရှိဘူးဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ဘောလုံးကို ပြန်ရအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး”
“အသင်းဖော်တွေမှာ ဘောလုံးမရှိဘူးဆိုရင် သူက စဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုမျိုး လူတစ်ယောက်ကို တစ်ပတ်ကို ပေါင် ၃သိန်းခွဲ ဘယ်သူက ပေးမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်း? သူ့ရဲ့ ကစားပုံကိုလည်း ခင်ဗျားတို့လည်း သိနေတာပဲ။ သူ့ခြေထဲမှာသာ ဘောလုံးမရှိဘူးဆိုရင် သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အညံ့ဆုံး ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဗျာ ဘောလုံးမကိုင်ထားနိုင်ရင် အညံ့ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ရှိရင် ပြောစမ်းပါ။ ဒီလိုမျိုး ဘောလုံးမကိုင်ထားရင် လှည့်မကြည့်တက်တဲ့ ကစားသမားကို တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ခင်ဗျားကို နာကျင်စေလိမ့်မယ်”
“ကဲ အာဆင်နယ်တသင်းလုံးကရော သူ့ကို ခြံရံပြီးတော့ ကစားနိုင်မလား? ဒီလိုအချိန်မျုးိမှာ ဘယ်လိုမှ မကစားနိုင်ဘူး။ သူ့အတွက်နဲ့တော့ အသင်းကစားပုံကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ သူက တပတ်ကို ပေါင် ၃ သိန်းခွဲယူပြီးတော့ အရာရာတိုင်းက သူ့အတွက် အေးဆေးဖြစ်နေတာပဲဗျ။ အာဆင်နယ်ကတော့ သူ့ကို စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းဖို့ လုပ်ကောင်းလုပ်လိမ့်မယ်။ မဟုတ်လည်း တခြားတသင်းမှာ တပတ် ပေါင် ၂သိန်းလောက်နဲ့ ကစားနိုင်တာပဲလေ။ ဒီလောက်ရတာက သူ့အတွက် ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဘောလုံးဆက်ပြီးတော့ ကစားချင်သေးလား? ကစားချင်တယ်ဆိုရင် အာဆင်နယ်နဲ့ စာချုပ်သစ်ထပ်ချုပ်လိုက်၊ ပြောရတာတော့ လွယ်တယ်နော်။ ဘယ်သူမှ တပတ်ကို ပေါင် ၁ သိန်းခွဲလောက်လျော့ယူပြီးကစားမယ်လို့တော့ မပြောဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲရရ ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဘယ်သူမှလည်း ဒီလောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံကို ပစ်ပြီးတော့ ကစားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Ligue 1 / Premier Leauge / Transfer
Rumor : PSG နှင့် ရာသီကုန်မှာ လမ်းခွဲတော့မည့် တိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီကို ခေါ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့် အာဆင်နယ် နှင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
လာကာဇတ် ၊ အူဘာမီယန်း နဲ့ ဂန္ဓဝင်ကစာသမားကြီး အီယန်ရိုက်တို့ရဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍ ရုပ်သံ
ရာသီအကုန်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းမှ EPL ဖလားကို ရမှတ် ၁၀၀ ဖြင့် ဗိုလ်စွဲဖို့ ၉၈% သေချာနေပြီဟု စူပါကွန်ပျူ တာမှ တွက်ချက်ဖော်ပြ
ယူနိုက်တက်မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာကို ကယ်တင်ဖို့ မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူးလ်ကို တိုက်တွန်းခဲ့သည့် ဘန့်
ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်များ ပျော်ရွင်ရမည့် သတင်းကို ပြောပြခဲ့သည့် ဆိုးလ်ရှား
နောက်ဆုံးမှာတော့ မန်ချက်စတာစီးတီး တောင်ပံကစားသမား ဆာနေးကို ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်